musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Bhizinesi Kufamba » Seychelles Gurukota rezveKushanya Inoshevedza paDMCs
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Bhizinesi Kufamba • Hurumende Nhau • Hospitality Industry • Hotera & Resorts • nhau • Seychelles Kuputsa Nhau • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Akasiyana Nhau
Gurukota rezvekunze uye Tourism uye Secretary Chief weSychelles Tourism vakasangana nemakambani mazhinji ekushanyira nzvimbo.
Achienderera mberi nebasa rake rekuzviziva nevekudyidzana veindasitiri yekushanyirana uye zvigadzirwa zvavo, Gurukota rezvekunze uye Tourism uye Secretary Principal for Tourism, Ambassador Sylvestre Radegonde, vakasangana nemakambani mazhinji ekushanyira nzvimbo neChina, Nyamavhuvhu 12, 2021.
Pakati pemisangano yake, Gurukota rakadaidzira kuti chigadzirwa nekusiyana kwebasa.
Akabatawo nezvekukosha kwekuisa tsika yeSychellois creole uye nhaka muzvipo zvekushanya munyika.
Secretary of Secretary for Tourism, Mai Sherin Francis, vakaperekedza Gurukota Radegonde parwendo rwemisangano.
Minister Radegonde vakatora chiitiko ichi kukumbira kusiyaniswa kwezvigadzirwa nemasevhisi, vachisimbisa pamwe nekudiwa kwekusimudzira chiitiko chevashanyi kuburikidza nekubatanidzwa kweiyo Seychellois creole tsika uye nhaka muzvipo zvedu zvekushanya.
Iko kushanya nemusi weChina kwakatangira kuPure Escape, DMC yemhando yepamusoro ine musika mukuru iRussia uye ine mahofisi kuUK, Maldives, Secheres uye UAE iyo inopa mapakeji kune vatengi vayo kusanganisira voga mabutler uye mafambiro ekushanya.
Mamwe makambani aisanganisira Sirivheri Pearl Kuratidzwa uye Kufamba izvo zvinopa zviitiko zvakasiyana siyana zvinosanganisira kushanya uye kuendesa kwakazvimirira, uye Cheung Kong Travel, ichinyanya kunanga kumusika weChinese, ichipa magweta emitauro akasarudzika kune vese vafambi nemapakeji.
Gurukota Radegonde vakasanganawo nemaDMCs mazhinji eSeychellois anosanganisira Summer Rain Tours, iyo inopa akawanda mapakeji uye echikepe charter services kuSaudi Arabia, Russian neEuropean vatengi, uye Ocean Blue Travel, inemhuri-kambani, inobatana nevatengi mu UAE, Germany kuburikidza newebsite yavo.
Dzimwe maSychellois-ane maDMC akashanyirwa anosanganisira Welcome Travel inopa mapakeji ekufambisa emakambani, vanhu uye mapoka mumisika yeEuropean uye Middle East, uye Luxury Travel iyo inopa mapakeji emhando yepamusoro kumisika yeRussia neMiddle East.
“Chikamu chakakosha pamabasa angu ehushumiri kuziva vadyidzani uye kunzwisisa bhizinesi ravo. Kushanya uku kunotibvumidza kuti tiratidzewo kuonga kwedu uye zvikuru kurudziro yedu kwavari kuti vashingaire mukupa masevhisi uye zvigadzirwa zviri nani kuvashanyi vedu, ”vakadaro Gurukota Radegonde.
Pamusoro pekuzvizivisa neDMCs, Gurukota Radegonde vakasimbisa kukosha kwemaindasitiri ekusiyanisa zvigadzirwa uye kusimudzira kushanya kwetsika. "Kukwidziridzwa kwetsika dzecreole hakungogadzirise chete zviitiko zvevafambi asi kuchajekesa patsika nemagariro emunharaunda pamwe nekupa vatambi vemuno nzvimbo yepasi rose," Gurukota rakasimbisa.
Secretary of Secretary for Tourism, Mai Sherin Francis, vakaperekedza Gurukota Radegonde parwendo urwu, vakati kushanya kwese mukana wekubatana nevamwe uye tinzwisise zvinetswa zvavo, izvo zvinobatsira Dhipatimendi Rezvekushanya kutarisa kusimudzira ruzivo rwevatengi rwekuenda kumatunhu ese.
Kushanya uku kunojekesawo nyaya dzakasiyana siyana uye kufambira mberi mukati meindasitiri yekushanya uye misika yenyika dzakasiyana.